ဒူးနာျခင္းကို ဘယ္လိုကုမလဲ? – Mandalar Hospital
For emergency cases:  +959796188100 , customerservicemanager@mandalarhospitals.com
Open/Close Menu Hospital Group
International Health Care Services
Bone Dexa Scan
Foodfare Garden Kitchen
ဒူးနာခြင်းကို အဓိက ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများမှာ-
ဒူးအရှေ့ဘက် အရွတ် ထိခိုက်မိခြင်း၊
စသည့် ရောဂါများကြောင့် ဒူးနာခြင်းကို အဓိက ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဒူးနာခြင်းကို ဘယ်လို ကုသကြမလဲ?
မိမိကိုယ်တိုင် အိမ်တွင် ပြုလုပ်နိုင်သော အရာများ…
မပြင်းထန်သော ဒူးနှင့် ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းများကို တစ်နေ့လျှင် နာရီဝက်ခန့် ပြုလုပ်ပေးပါ၊
အရိုး၊အဆစ်သန်မာစေသော အစားစာများကို စားသုံးပေးပါ၊
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ဆေးများကို အချိန်မှန် သောက်သုံးပေးပါ၊
ဒူးကို အားပြုရသော အလုပ်များကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။
အထက်ပါ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် မသက်သာပါက အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ် အထူးကုဆရာဝန်နှင့် ပြသ၍ ဒူးဆစ် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း နှင့် သွေးဖောက်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း နေ့လည် (၁)နာရီ မှ (၃)နာရီအတွင်း ဒူးဆစ်အတွက် သီးသန့်ကုသပေးနေသော Knee Clinic တွင် လာရောက်ပြသနိုင်ပါသည်။
ယခုအခါ တွင် ဒူးနာဝေဒနာကို ကြာရှည် ခံစားနေရသူများအတွက် ဒူးဆစ်အစားထိုးခွဲစိတ် ကုသမှုများကို နိုင်ငံခြားထိ သွားရောက်ကုသစရာမလိုပဲ မန္တလေးမြို့ရှိ မန္တလာဆေးရုံတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ စက်ကိရိယာများနှင့် ဝါရင့်ဆရာဝန်ကြီးများ ကိုယ်တိုင် ခွဲစိတ်ကုသပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
ကုိဗစ္ျဖစ္ၿပီးလုိ႔ ေဆးရုံကဆင္းတာနဲ႔ ေရာဂါေပ်ာက္ၿပီလား?
မြန်မာနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကို ကူးစက်ခံရပီဆိုလျှင်- ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အဆစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊…
ကိုယ္ဝန္ဆောင္ မိခင္မ်ား ဒီအစားအစာမ်ား မစားသင့္ပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေများ ဤအစားအစာများ ရှောင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိအတွက်သာမက မိမိ၏ သန္ဓေသားပါ ကျန်းမာစေရန်အတွက် အစားသောက်၊ အနေထိုင်ကို အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ရှောင်ကြဉ်…
သင် ဗီတာမင်-D ဓာတ် လိုအပ်နေပီလား?
ဗီတာမင် Dကို နေရောင်ခြည်မှ ပေးသော ဗီတာမင်ဟူ၍ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ပါက … အရိုးပျော့ရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါ၊ အရိုးကျိုးလွယ်ခြင်း၊ မကြာခဏ နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း၊…
© 2020 - Mandalar Hospital by Plan B Entertainment
For emergency cases  +959 796188100 , customerservicemanager@mandalarhospitals.com